Ebee ka m nwere ike ịhụ mkpọchi igwe ọha? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Obodo igwe kwụ otu ebe - ihe kachasị mma
Obodo igwe kwụ otu ebe - ihe kachasị mma
Ebee ka m nwere ike ịhụ mkpọchi igwe ọha?
Rackspotter bụ ngwa ọrụ n'efu nke BikeArlington na-akwado. Ọ na-enye ndị mmadụ ohere iji PC ha, Mbadamba ụrọ, ma ọ bụ ama namatana rịba amana-adọba ụgbọalaebe na mpaghara niile. Ihe ị ga - eme bụ ịbanye, jiri ma ọ bụ map dịnụ ma ọ bụ GPS ekwentị gị gosi ọnọdụ gị, ma debe aogbeakara na eserese ngosi. g.
Ebee ka m ga-adọba ịnyịnya ígwè m na NYC?
NYCGarages naEbe a na-adọba ụgbọala
85 4th Ave (na 10th St.) -
888 Asatọ Avenue (na 53rd Street) - $ 10 kwa 10 awa.
102 Lasalle St (b / w Broadway & Amsterdam) - $ 10 kwa ụbọchị, $ 90 kwa ọnwa.
80 Pine Street (West nke Water Street b / w Pine na Maiden)
Ihe nkpuchi igwe kwụ n’ịjọ maka igwe kwụ otu ebe?
Hitch-ndokwasaigwe kwụ otu ebedị nchebe karịa ogwe osisiracks, ma ha nwekwara ụfọdụ ọghọm. Ọ bụ ezie naogbeadịghị nwere kpọmkwem kọntaktị na ụgbọala, naigwe kwụ otu ebenwere ike kụrụ ụgbọ ala ma ọ bụrụ na echekwaghị ya nke ọma. Ọ bụrụ naigwe kwụ otu ebesways ma ọ bụ wiilị atụgharị, ọ nwere ike ịdakwasị ụgbọ ala ma mebie emebi.
ee echi ọ bụ ihe dịka elekere 4:30 nke ụtụtụ ka onye turu anyị n'ụra ihe dịka elekere gara aga site na onye zuuru igwe kwụ otu ebe anyị mgbe anyị na-ehi ụra, ọ dabara nke ọma na ha jisiri ike zuo otu igwe kwụ otu ebe ha na-enweta n'ụzọ nkịtị dịka bọta batara mkpọchi a, gịnị bụ mkpọchi mkpọmkpọ ala, ị maghị na nke ahụ bụ ihe niile ị nọ n’ime. ha na-agbawa nke meghere nke na-ewe iwe n'ezie, nke a bụ ihe kachasị iwe na ha mebiri mkpọtụ ahụ ka anyị wee chọta mkpọchi ọhụrụ can't nweghị ike inwe ihe ọ bụla? Echere m, echere m na ị ga-elele akụkụ dị mma nke ihe ndị ị maara, enwere m olileanya na onye ọ bụla were ya dị ya mkpa n'ezie. ha maara ihe ha na-eme. a haziri ha ngwa ngwa. ihe niile gara na sekọnd, yabụ ee, anyị nọkwa na onye ọrụ ugbo ọhụụ, anyị nọ na montenegro ugbu a, ọ dị mma ịnabata, anyị nwere montenegro nke abalị mbụ ana m ekele gị, ejiri m n'aka na ọ dịghị njọ, ọ gaghị egbochi anyị ileta montenegro na-enwe obi ụtọ n'ihi na amaara m na ọ bụ mba mara mma m nọrọ ebe a na enweghị m ike ịkekọrịta nke a na nwanyị a mara mma, ọbụlagodi na nkeji ole na ole anyị nọrọ ebe ahụ mara mma yeahokay ngwa ngwa n'ihu izu abụọ anyị nọ na Albania spoiler anya anyị dochiri push bike a mara mma ihe anyị ẹmende na isi obodo Tirana nke ibu ịhọrọ site na ma nke a abụghị ihe ọhụrụ, ọ na-eji n'ezie ma ọ bụ nke zuru okè, ọ dị mma. anyị achọghị n'ezie nke ọhụrụ anyị achọghị dangle karọt maka ndị chọrọ izu ohi igwe kwụ otu ebe anyị na-echekwa nchekwa m ga-egosi gị ịbịa ebe a anyị nwere igwe olu dị mma nke ga-akpọte anyị ma ọ bụrụ mmadụ na-anwa izu ohi mgbe ha laghachị na-ehi ụra.
Beastie gbachiekwa anyị nwetara nke a nke ahụ bụ ihe m chọrọ ka ọ bụrụ mkpọchi yiri nke ị na-enweghị ike ịkpụ site na ndị na-akwa ya ma anyị tinye ha ọnụ ma ọ bụrụ na anyị jisie ike tufuo ha, ha enweghị ike ịga na ya ọzọ ịnya anyịnya. . Ya mere, m na-ekwu, nke ahụ bụ ihe niile i nwere ike ime ma ọ bụrụ na ha chọrọ ya, ha na-aga-ewe ha na agbanyeghị, ya mere ọ dịghị ewepụ anyị ịnwe igwe kwụ otu ebe, mana mba, m na-ekwu, ị ga-echekwa nnukwu ego ọbụlagodi ị na-azụ igwe kwụ otu ebe ị ga-echekwa nnukwu ego na ebe a na-adọba ụgbọala na ọ bụ naanị ihe kachasị mma n'ụwa iji weta igwe kwụ otu ebe, ee, ekwela ka nke ahụ mee ka ị pụọ ndị mmadụ ọ bụ ahụmịhe dị ịtụnanya anyị nwere olile anya nwere opekata mpe enyere gị aka ikpebi ma ị ga-eweta igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ na ọ bụghị, ekwela ka ọ hapụ gị, ọ dị mma na ihe anyị ga-ahapụ gị na mpaghara a mara mma nke anyị nọrọ ebe a na Albania n'abalị ụnyaahụ, obodo mara mma nke ị ga-ahụ ụfọdụ nwee ezigbo blọọgụ eeh HERE maka ọganihu!
Ego ole ka igwe eji agba igwe kwụ otu ebe?
N'ozuzu,igwe kwụ otu ebe nwere ike ịkwụ ụgwọebe ọ bụla si $ 25 ka $ 1,000 dabere na ụdị nkeogbena atụmatụ ya.
Daalụ maka ndepụta, nke a bụ The SweetCyclists, taa anyị na-ele MaxxHaul foldable floor stand. Ya mere, anyị nwere n'ala guzoro na igbe ya. Achọrọ m ikele MaxxHaul maka izipu nke a maka nyocha.
Ihe na-eme ka ngwaahịa a na-adọrọ mmasị bụ eziokwu ahụ bụ na ọnụahịa ya dị oke ala. Ọ bụrụ na anyị gafere ụdịdị ahụ, ị ​​ga-ahụ na ọ na-efu ihe karịrị $ 20, na-ejikwa ihe ọ bụla site na wiil 20 ruo 29-inch, ma nwee imepụta ogwe aka. Emere ya site na aluminom nile ma ọ bụ naanị ihe na-erughị kilogram isii, yabụ na-ebugharị ya na kọmpat.
Yabụ ọ bụ ngwugwu mara mma mara mma, ọ bụrụ na ị wepụ ya na plastik ị ga-ahụ na a chịkọtara ihe niile. Nke a bụ ihe na-agwụ ike iwepụ ebe ị na-adọpụta ya na igbe ahụ. Enweghị nzukọ na ebe a ị ga-enweta akwụkwọ ntuziaka nke ụdị dị egwu O doro anya na ị na-eji iko nchekwa iji dọba igwe kwụ otu ebe gị.
Ka anyị wepụta ya n'akụkụ ma hụ ngwaahịa ahụ gbakọtara n'ụzọ zuru ezu yana na ogwe aka ntụgharị. Ọgwụgwụ ahụ dị ezigbo mma, ị nwere ike ịhụ na e nwere ụfọdụ ụdị ọla dị na akụkụ aluminom nke ekpughere, mkpụrụ na bolts na mgbe ahụ aka dị ala, ndị na-emechi ahụ bụ ndị iberibe n'otu n'otu. Nke a bụ ntụgharị site na Topeak lineup, ma ọ bụghị na ọ nwere otu imewe.
Nke a bụ a siwing ogwe aka imewe, i nwere a obere mmiri ebe a na ọ na-ejide ogwe aka. Mgbe m dọlitere ya, ị ga-ahụ na e nwere ntụtụ n’akụkụ nke na-akụnye ya ebe. Naanị dọpụta ya ka ị hapụ, yabụ ọ bụ ọrụ aka abụọ.
Ọ bụrụ na m wepụ ya wee nwee ike ịpịa ya ọzọ. Ka anyị lebakwuo anya na arụmọrụ na ọrụ nke MaxxHaul mpịachi stampụ ala, nke a na-ere n'ezie na Amazon. A na-enyocha ya nke ọma, mana maka ọtụtụ ihe na Amazon, echiche dị ebe niile.
Fọdụ ndị na-ekwu na ọ na-ada n'igbe ahụ ebe ndị ọzọ na-ekwu na ọ bụ ihe kacha mma ha metụrụla na ndụ ha. Ọ bụrụ na anyị mere nlele 360 ​​ị ga-enwe mpempe akwụkwọ plastik ahụ na-agbanwe agbanwe igwe gị ga-adaba. Anyị nwere aluminom mara mma nke nwere agba flake na-arụ ọrụ nke ọma.
Ha nwere ụkwụ rọba ndị ahụ na-enwu gbaa na ha, nke a bụghị ihe ijuanya na ọnụahịa ahụ. Akụrụngwa ahụ n'onwe ya dị mma nke ukwuu, ị nwere rivets na ala nke na-ejide ogwe aka nke ebe ahụ. N'aka nke ọzọ, ị ga - enweta mkpado ịdọ aka ná ntị maka ihe nkedo ahụ, mkpọchi mkpọchi nke na - ejide ya, anyị nwere mmiri ebe a iji mee ka ogwe aka na - agbanye.
A na-ejikwa aluminom mee akụkụ ahụ. Mgbe anyị mepere ya, ị ga - ahụ na ọrụ dị mma. Mmiri na-egbochi ya ịlaghachi ma nye ya ụfọdụ esemokwu.
Otú ọ dị, iji dobe nke a, ị ga-adọta ngbanwe nha na nke a bụ ọrụ aka abụọ nke na-adịghị mfe iji. N'ihe banyere okwesiri na imecha, ka anyị leba anya na onye asọmpi ebe a n'aka nri, enwere m nkwụnye akara Topeak maka $ 65. Emere m nyocha zuru ezu na ya, aga m etinye njikọ na n'elu aka nri, na na n'aka ekpe anyi nwere MaxxHaul.
Ozugbo ị ga-apụ, ị ga-ahụ na ụdị aluminom a na-egbu maramara dị mma ile anya ma na-atụ anya na ọnụego ọnụahịa a. Ihe ọzọ dị oke mkpa bụ na Maxxhaul nwere ike belata ọnụego site na ịghara ịkpụkọta ụkwụ ya. Nwere ike ịhụ na Topeak niile enwere ike ịpịgharịa, nke ahụ pụtara na ị ga - enweta obere kọmpụta enwere ike ịbelata nke mere na nke a bụ ihe ị kwesịrị ịtụle ma ọ bụrụ na ịchọrọ iso ya gaa njem.
Nwere ike itughari topeak na akpati ụgbọ ala gị mgbe topeak dabara na akpa gị. M n'ezie mere na. Nke a dịtụ mfe ma e jiri ya tụnyere nke MaxxHauland pere mpe, mana ma ọ bụghị na ha fọrọ nke nta ka ha yie m.
Ihe ọzọ ị ga-atụle bụ usoro n'onwe ya, yabụ na ha na-eji usoro bọtịnụ maka topeak. Ọ bụrụ n ’lee n’elu elu, ọ na - ewepụta ogwe aka. Yabụ na ị sere elu, dọghachi azụ, wee kwatuo ka ọ dịrị gị mfe iji ya tụnyere atụpụta set ahụ.
ragbrai ọnụ ọgụgụ ndị na-agba ịnyịnya
Ma ọ bụghị ya, echere m na enwere m obi ụtọ, ihe niile yiri ka ọ na-arụ ọrụ dịka akọwara ya ma ị ga-enweta otu atụmatụ ahụ dị ka akara ahụ mana na ọnụ ala dị ala karị. N'ebe a, anyị ejirila MaxZHaul guzoro na myZipp 2001, ị nwere ike ịhụ na ọ dị mfe ịgbakọta ma gbasasịa igwe kwụ otu ebe. Ogwe aka rọba dị n'okpuru ahụ na-arụ ọrụ nke ọma karịa, ịkwesighi itinye ụkwụ gị na ntaneti ka ọ ghara ịpụ.
Ugbu a ị nwere ike ịhụ na m nwere ike ịmegharị ya nke ọma, ọ naghị ata m ma ọ bụ ihe ọ bụla gbasara nkwụsi ike. Nwere ike ịhụ na m nwere ike iru ezigbo akụkụ dị elu ma igwe kwụ otu ebe agaghị ada. Ọ dị ntakịrị slack n'ihi na akụkụ dị ala anaghị enwe ọtụtụ mpaghara kọntaktị ka ị wee hụ na ị nwere ike wigle igwe kwụ otu ebe gị ugbu a.
Enwere ike ịme nke a ka mma ma ọ bụrụ na ha agbakwunye obere roba na ala, nke a bụ ilekwu anya na nguzo ahụ na igwe kwụ otu ebe m, ebe ị nwere ike ịhụ na ọ na-arụ ọrụ nke ọma, ị gaghị etinye ụkwụ gị na nkwụnye ahụ ma gbochie ya n'ihi ntakịrị ọdụ ọdụ ka ị wee hụ. M na-agbanyeghachi wiilị ojii ojii dị na azụ nke na-agbagharị ma pịa ebe. Nanị ihe m na-eche ebe a bụ nke a, ebe a bụ nke aluminom na enweghị ebe kọntaktị buru ibu ka m wee nwee ike igwu egwu site n'akụkụ ruo n'akụkụ, mana ọ dị ezigbo mma ma e wezụga obere ihe ahụ n'akụkụ n'akụkụ.
Echere m na ihe niile na-ejide nke ọma ma ọ gaghị ada. Echere m na enwere obi uto na ya, echere m na nkwụsi ike dị mma, enwere ọnụọgụ ego ole ha jiri ogwe aka ndị a na-enweghị ike ibugharịa mana ewezuga nke ahụ, echere m na ọ bụ ezigbo ngwaahịa wuru ewu na $ 20 ọ siri ike inweta na-egosi uru na ọghọm nke ala foldable si MaxxHaul. Echere m na ụfọdụ uru bụ ihe dị ọnụ ala iri abụọ ihe ọnụahịa dollar nke na-esiri ike iti ike, ndị ọzọ na-akwụ ụgwọ bụ kọmpụta nke swingarm.
Enwere m mmasị na nhazi a, ọ dị ọtụtụ, ọ nwere nkwụsi ike na ndakọrịta na wiil dị iche iche. Fọdụ n'ime ala bụ mpịachi ogwe aka hapụ, ọ bụ ntakịrị aghụghọ iji jiri ya rụọ ọrụ aka abụọ nwere ike iji otu aka rụọ ma e jiri ya tụnyere Topeak. Stabilkwụ ụkwụ na-eme ka mgbatị dị ala adịghị agba, yabụ ọ dị ntakịrị ibu, ọkachasị mgbe ọ na-apịaji ya kpamkpam, ịnweghị ike itinye ya n'ụzọ niile na akpa gị, a na-enyekwa ya naanị n'otu agba, nke a na-etinye ntụ ntụ.
Ugbu a anyị gaferela elele na uru ndị anyị ga-enye ihe a. Echere m na nke ahụ bụ asatọ na ọkara n'ime 10. M ga-asị na ọ bụ ihe dị ọnụ, kọmpat mpịachi nkwụnye, na maka ọnụahịa ahụ, ọ na-esi ike iti.
Ọ na-enye nkwụsi ike na ntụgharị dị gị mkpa, ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ogwe aka na-apịaji ma nwee ntakịrị mnwe ihu ka igwe kwụ otu ebe ghara ịmasị ya n'akụkụ ma n'ozuzu ya. O doro anya na ọ dị mma karịa ụfọdụ ụdị nsụgharị dị ọnụ ala. Daalụ maka ilele nyocha a.
Echefukwala mmasị na ịdenye aha na ọwa. Soro anyị na Instagram na @thesweetcyclist wee gaa na webụsaịtị anyị na thesweetcyclists.com maka ọdịnaya ndị ọzọ.
Nke a bụ The Sweet Cyclists na-echetara gị ka ịnụ ụtọ njem ahụ!
Kedu ka igwe nrụpụta igwe ọha si arụ ọrụ?
Ndị aọha na eze racksnye agbụ zoro ezo n'ime okporo osisi ndị ahụ. Nwere ike dọpụtapụta yinye na kpọchie ya gị ike etiti mkpọchi na-eje ozi ọbụna karịa ụdịigwe.Mar 9 2017
Nwere ike ịgba ịnyịnya ígwè na Fort Tryon Park?
Ogige Ugwu Fort Tryon
Can nwere ike ịgba ígwètinyere Heather Gardens ma ọ bụ nọdụ na Linden Terrace iji nwee ntụrụndụ na Palisades a na-emetụbeghịOgigen'ofe osimiri. Naogigeoghere mepere emepe Manhattan kachasị nkịta na-agba ọsọ nke zuru oke na gazebo kere karịsịa maka ndị nwe nkịta ka ha na ndị ọzọ na anụ ụlọ na-akpakọrịta.
A na-ezu ohi igwe kwụ otu ebe?
Ezuru igwe na-ezurusite naracksn'ụgbọala, n'agbanyeghị na akpọchiri mkpọchi. Mana ikwesighi ịhapụ gịigwe kwụ otu eben'ụgbọalaogbea na-elekọta ya ruo ogologo oge ma ọ bụ n’otu abalị — ọ bụrụgodị naogbeakpọchiri. “Mkpọchi aigwe kwụ otu ebeiri aogbebụ ihe mgbochi nke na-etinyekwu oge na mbọ iji zuo ohi, ”ka Chris Ritchie nke Thule na-ekwu.25.10.2015
Uzo abuo a na - achoputa umuaka iji chebe gianyịnya igwesite na ịgbagharị n'ime ibe. Ha nwere (doro anya) ogwe aka abụọ, kama naanị otu. Onye ọ bụlaigwe kwụ otu ebena-echebe onwe ha. Mụbara mgbagwoju anya na iberibe chọrọ iwu a ịke nkeogbena-eweta ụgwọ ọrụ mmepụta nke ukwuu.16.06.2017
Kedu ka m ga-esi dọba ịnyịnya ígwè m n'ime ebe a na-adọba ụgbọala?
Otu n’ime ụzọ kachasị dị mfe ma dịkwa ọnụ ala iji chekwaa gịigwe kwụ otu ebenwere ezigbo ihe eji eme ka roba rụọ ọrụ iji mee ka ọ banye n'ime ọkpọ ma ọ bụ ntụhie. Kpọgidereanyịnya igwenwere otu nko maka vetikaligwenchekwa, na nko abụọ etinye aigwe kwụ otu ebeobosara iche maka kehoraizin nchekwa.
Ebee ka m nwere ike ịnweta igwe kwụ otu ebe maka ụgbọ ala m?
Ngwakọ Car Servicing Electric Car Calculator Motoring Motoring Nso menu Home Motoring Mobile Dabara Adaba Services Free 5 Point Car Check Engine mmanụ & nkwupụta ụda; Fluids Battery Mmezi Batrị Bulbs Wiper Blades Car Ihicha MOT Car Ije Ozi Car Ndozi taya Ikuku Conditioning Pressers Washers Pressure Washer Ngwa
Enwere ike ịdọnye igwe kwụ otu ebe na Thule n'ụgbọala?
Iji igwe kwụ otu ebe maka ụgbọ ala site na Thule, ị ga-enwe ike ịgba ịnyịnya n'okporo ụzọ ndị dị anya ma ọ bụ igwe kwụ otu ebe dị anya site n'ụlọ site n'okirikiri ọhịa. Legbọ ala ịnyịnya ígwè nke Thule na-abịa n'ụdị dị iche iche ma nwee ike ịdokpo gị n'elu ụlọ gị, ụgbọ mmiri gị, ma ọ bụ na ogwe gị.
Ọ dị mma itinye akwa igwe kwụ otu ebe n'elu ụlọ?
Maka udo nke uche, a na-emechi mkpọchi igwe kwụ otu ebe anyị niile. Ihe nkpuchi igwe kwụ otu ebe na-ewe nsogbu site n'inweta igwe kwụ otu ebe gị site na A ruo B na-ebulighị ya n'elu ụlọ. Ha dị mma, sie ike, nwee nchebe ma nye gị ohere ịnweta buut gị n'otu oge.